Unokwenza njani ubisi obuninzi ukususa i-makeup?
Kukho iintlobo ezimbini zobisi lwezonyango: yintoni esetyenziselwa ukucoca nokunyusa isikhumba, kunye nantoni esetyenziswayo ukususa izimonyo. Ukususa okanye ukuthatha i-molochkom kunokwenzeka, kwaye ngamanye amaxesha kubalulekile nakwimfuneko (ukuba kuwe isikhumba esomileyo kuboniswa) izimonyo ezingenanzi ngamanzi.
Ngoko ke, ukuba ungumnikazi wesikhumba esomileyo, ngoko uyazixabisa iipropati zobisi lwezonyango. Ukuthungwa kwalo kukuvumela ukuba unyuse isikhumba, kulula ukuyithatha, ushiye umva wokutshatyalaliswa kunye nentuthuzelo kwesikhumba sakho. Kodwa kuqala ubisi bonke ngumhlambululi. Ukuba abanye abahlambululi besikhumba bayomisa - kuba yi-tonic, isithintelo sokwakheka kwamanzi, i-foam, i-gel yokuhlamba okanye yokuhlamba ngamanzi alula-ubisi ludibanisa inzuzo yocwiliso olusondezayo okanye olusondlo kunye nokucoca ulusu lweentlobo ezahlukeneyo zokungcola. Kakade, ubisi wedwa aluyi kufaka indawo yokunyamekela kwesikhumba epheleleyo, okubandakanya ukucoca nje kuphela, kodwa ukuxilisa kunye nokunyusa nokutya. Izalise ngokugqibeleleyo ukunakekelwa kwesikhumba kwiimeko apho ulusu ludinga ukucocwa kakuhle.
Ubisi bokususa i-makeup bucetyiswa ukusetyenziswa kwesikhumba esomileyo, okanye isikhumba esikhulileyo, xa ubomile ngumqondiso weminyaka. Kukho iintlobo zobisi, ezinokuthi zinconywe ngokukhuselekileyo kwesikhumba seoli. Konke kuxhomekeke kudibaniso lwamacandelo ebisi. Ekubeni umkhiqizo ngamnye wezonyango ungumxube wamacandelo anokwakheka kwamanzi kunye nezixhobo ezisekelwe kwi-fat, kwaye ubisi alukho uhlobo, nawuphi na uhlobo lobisi lunokutshatyalaliswa nokususa zonke iintlobo zokungcola.
Ubisi bunemizimba emigqabini yamanzi, kuyinqweneleka ukuyisebenzisa nge-cotton swab, nangona kunokwenzeka ngeentsimbi. Shiya ubisi esikhumbeni isikhashana ukuze ungene. Ubisi obususiweyo, kuxhomekeke kwizinto ozikhethayo kunye nezixhobo zesikhumba sakho, mhlawumbi ngepotton pad, okanye uhlamba ngamanzi nje.
Ukuba ukhathalele ngemeko yesikhumba sakho kwaye uthembela iimveliso zendalo, ungazama ukudala ubisi lwakho olwenziwe ukuzenzela ukuze ususe i-makeup. Ngokuqinisekileyo, kuya kuba yinto eqinile njengoko isitoreli esisodwa, mhlawumbi, kuya kufuneka sigcinwe kwifriji. Nangona kunjalo, ubisi olunjalo luya kubangela uvuyo lokwenene kubantu abathanda ukukhupha ulusu lwabo ngento efanelekileyo kunye neyodwa.
Musa ukuxhalaba ukuba sele usuyazi indlela yokwenza ubisi ngokwayo ukususa iimpepha, kodwa ungakagqiba kwelokuba uza kuwugcina. Iza kuvela kwiimbiza ezizenzekelayo ezingenanto. Ukuba awuwashiyi kude, uncede ube negalelo ekuhambeni kwe "eluhlaza". Ngaphezu koko, ezinye iinqanawa zihle kakhulu, kwaye awufuni ukuziphosa ngaphandle. Ngaphezulu kwileyibhile yefayili enegama, mhlawumbi enye indlela, unokubamba idibhoni enhle okanye icandelo lephepha. Ukubukeka kakuhle kwizonyuka ezizenzela kwiibhotile ezivela kumayeza. Igalazi e-Brown iya kunceda abaphakathi bahlupheke ngaphantsi kwelanga.
Ngoko, ngaphantsi kwakho uza kubona iindlela zokupheka ezimbalwa, indlela yokwenza ubisi ngokwayo lususe umququ.
Thatha ukungena kwe-marigold emanzini. Yenziwe kwiimbali ezomileyo okanye ezitsha. I-tablespoon yeentyantyambo ichithelwa kwiglasi yamanzi abilayo kwaye igxininise kwiiyure eziliqela. Sidinga i-0.5-0.75 iziglasi zale ngxube. Pound i-yolk enye yeqanda nge-teaspoon yeoli yendalo. Hlanganisa zonke izithako: ukukhishwa kwe-marigold, i-yolk nge-bhotela, 250 ml ye-ukhilimu yobisi olutsha, ukucoca kwi-juice ye-lemons, amaconsi ambalwa eoli efunekayo ye-orange okanye imon, 25 g yeoli ye-camphor kunye nepuniki ye-honey. Ubuninzi, ngokusemthethweni, kuyadingeka ukuqinisekisa ukuba xa udibanisa zonke iinqununu, zenza ubunzima obufanayo ngokubanzi, kwaye akubonakali ngokucacileyo ukucaciswa kwe-biphasic (oko kukuthi, i-oyile ayifakali phezulu kwimixube). Ngaphandle koko, kuya kufuneka ugubungele umxube ngaphambi kokusetyenziswa ngalunye. Umxube ugcinwe kwiqrijini ezimbini kwiiveki. Ubisi obufanelekile bokususa i-oily skin, ngokukodwa kwixesha elibandayo.
Kwesikhumba esiqhelekileyo, unokwenza i-formulation elula: uvuselela ngokuqhubekayo, kwiglasi ye-cream kongeza kancane i-yolk, i-3 tablespoons ye-lemon juice, isipuni se-cognac. Umxube ugcinwe kwiqrijini kwisitya seglasi.
Ekugqibeleni, ngenxa yesikhumba esomileyo, siya kulungiselela umxube kunye nokudibaniswa kwee-herbs. 100 igramu zobisi zonkcisi zixutywe kunye nezilwanyana ezi-2 kunye neepunipoyi ezi-5 zejisi lemon. Yongeza i-30 grams ye-infusion infusion (i-alternating, chamomile - yonke into enconywayo yesikhumba esibuhlungu), ihlanjululwe kwi-25 grams ye-vodka kunye neepunipoli ezi-2 ze-glycerin.
Makhe sihlalutye umlo ngamnye. Ngesikhumba somnxeba sithatha i juisi eninzi, kuba ngenxa yekhrimu inokuphelisa, kufuneka sidibanise ubusi. Ioli ye-camphoric ithuthukisa igazi kwiinkonzo, ngokubambisana namanye amacandelo aza kusebenze inkqubo yeeseli zesikhumba. Ubume buya kuphucula. Ulusu luya kuba lukhulu kwaye lube lukhulu.
Ukunyuka kwe-Herbal, eyongezwa kubisi kwesikhumba esomileyo, kufuneka ube nefuthe. Iitrob ziyimithombo eyongezelelweyo yamavithamini. Izinto eziqulethwe kwi-yolk yeqanda (inqaku, sifake izilwanyana ezimbini kubisi lokugqibela, kwaye akukho nanye), ubuyisele ukulinganisela kwe-hydrolipid yolusu. Ukubeka nje, izikhupha zifunekayo ukuze ziphuculise isikhumba kwaye zincede ukugcina umswakama.
Ngamanye amarephepthi aklanyelwe ukulungiselela i-100-150 g yobisi. Lo mqulu kunye nokusetyenziswa rhoqo usebenzisa nje ngexesha lokugcina ubisi kwiqrijini. Ukuba ukwesaba ukuba ukhilimu uya kutywala, ungathabathi ukhilimu olulungele, kodwa ususe kuwo ubisi oluhleliweyo. Ezi i-krimu ezithengiswa kwiingxowa, kwakhona, ngokuqhelekileyo aziyikutsala. Ezi zokupheka zenzelwe ukusetyenziswa kunye nezimonyo eziqhelekileyo nezingenawo amanzi. Nangona kunjalo, kufuneka ugweme ukusebenzisa ubisi ukuze ususe ama-makeup emehlweni, ingakumbi ukuba uthathe umyalelo wesikhumba esomileyo. Ijisi le-lemon kunye nezinye izithako kunokubangela ukukhathazeka kweso. Ukubonga izimonyo zemvelo kunokwenzeka ukuba ucebise ukusebenzisa kule meyile ioli ye-castor.
Indlela yokuphumeza indlela yokwenza izinto ebomini: iziphakamiso zamacwecwe
Ukuzinza okungaqinisekiyo: I-Dolce & Gabbana Ama-Makeup Passionproof
Ikwindla yaseSicilian: iqoqo le-makeup i-Dolce ne-Gabbana Wild malunga nokuwa
Umlomo ocacileyo-umonakalo othakazelisayo-2017
Yenza kwindlela yokupakisha
Ukusikwa kwe-facial emva kweentsholongwane zeBotox
Indlela yokukhetha i-mascara epheleleyo kanye kunye nayo yonke into: 3 imithetho ephambili
Indlela yokuziphatha nomntu ukugcina ubudlelwane?
Yintoni umntu okufanele ayenze xa ejongene nentsapho yakhe
Iqoqo leNkohlakalo likaNicolas Zheskier loLouis Vuitton
Indlela yokucoca i-aquarium ngokufanelekileyo
USergey Shnurov, i-biography
Ukukrakra emlonyeni ngexesha lokukhulelwa
I-Horoscope ye-Capricorn-amadoda ngo-2016 - uthando kunye nomnyaka wokuzalwa
I-etiquette ye-elektroniki: yiyiphi imigaqo yokuziphatha eyabonakala kwikhulu lama-21
Omelette encinane yemifino